Carlo Anlcelotti ayaa kula taliyay Zidane in uu diido dalabkii tababarenimo ee Bordeaux 2014 – Gool FM
Carlo Anlcelotti ayaa kula taliyay Zidane in uu diido dalabkii tababarenimo ee Bordeaux 2014
(Madrid), 22 Sebt 2016 –Tababaraha kooxda Kubadda Cagta Bayern Munich ee Waddanka Jarmalka Carlo Ancelotti ayaa shaaca ka qaaday inuu isagu ahaa ruuxii kula taliyay Zidane in uusan tababare u noqon kooxda Bordeaux sanadkii 2014 ee taa beddelkeeda uu isaga gacan yare u sii ahaado Real Madrid.
2013-2014 ayaa Macallinka haatan ee Madrid, Zidane waxa uu dalab tababarenimo ka helay kooxda Bordeaux ee Faransiiska, hase yeeshee waa uu diiday, wuxuuna go’aansaday inuu sii joogo Real Madrid oo uu ku xigeen tababare u sii ahaado Ancelotti oo uu waqtigaa macallin u ahaa Real Madrid.
“Taladii aan siiyay Zidane waxay ahayd inuu ila sii joogo Real Madrid, halkii uu ka aadi lahaa Bordeaux, waxaana uu go’aansaday marka hore in uu tababare u soo noqdo Real Madrid Castilla, taasoo u ahayd khibrad wanaagsan; haatanna waa tababaraha Real Madrid” ayuu Ancelotti u sheegay Wargeyska ‘L’Equipe’ ee Faransiiska.
Ancelotti waxa uu xusay in Zidane uu yahay shaqsi dabci wanaagsan oo ciyaartoyduna aad u ixtiraamaan isla markaana ku najaxay inuu tababarenimadiisa Real Madrid oo loo magacaabay Janaayo 2016.
De Lima Ronaldo oo 40 jirsaday (Maxaad ku xasuusataa Il Fenomeno?)
Kooxda Real Madrid oo ka warbixisay xaaladda caafimaad ee Casemiro